Tottenham oo waynaysa xiddigo muhiim ah kulanka sabtiga ee Liverpool – Gool FM
Tottenham oo waynaysa xiddigo muhiim ah kulanka sabtiga ee Liverpool
Liibaan Fantastic September 13, 2018
(London) 13 Sab 2018 Tababare Pochettino ayaa helaya war aan wanaagsanayn ka hor kulanka kooxdiisu ay soo dhawayn doonto Liverpool sabtiga.
Tottenham ayaa garoonkeeda ku marti qaadi doonta galabka sabtiga Liverpool oo qaab ciyaareed fiican ku bilaabatay Premier League xiliciyaareed kaan.
Warbixin ku aadan ciyaartoyda diyaarka u ah kulanka Liverpool iyo kuwa seegaya ee ay soo saartay Tottenham ayaa lagu sheegay maqnaashaha xiddigo dhawr ah.
Kabtanka Tottenham ee goolhaye Hugo Lloris ayaa ku jira xiddigaha sida rasmiga ah loo xaqiijiyay inay seegayaan kulanka adag ee Liverpool, wuxuuna qabaa dhaawac dhanka bowdada ah oo uu la maqnaanayo muddo isbuucyo ah.
Sidoo kale, Dele Alli ayaa ku jira ciyaartoyda la xaqiijiyay inay si rasmi ah u seegayaan kulanka Liverpool, wuxuuna qabaa dhaawac dhanka muruqa ah.
Juan Foyth oo ah daafac 21 jir ah iyo Moussa Sissoko ayaa iyaguna qayb ka ah xiddigaha Tottenham ee seegaya kulanka Liverpool.
Enrique oo ku fikiraya in Jordi Alba uu dib ugu soo celiyo xulka Spain
“Marnaba uma maleynayo inaan ka tagayo kooxda Real Madrid”… Marco Asensio